Saddex Arrimood Oo Kenya Ka Hor Istaagaya Inay Xidho Xeryaha Qaxootiga
Wednesday April 07, 2021 - 08:06:58 in News by Hadhwanaag News
"Hayadda Amnesty waxay aad uga soo hor jeeddaa baaqii kasoo baxay Kenya"
Hayadda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo saartay warbixin ay uga soo hor jeedsatay go'aanka ay dowladda Kenya ku sheegtay inay xireyso xeryaha Qaxootiga Dhadhaab iyo Kakuma.
Laanta ay hay'addan caalamiga ah ku leedahay dalka Kenya ayaa ka digtay in tallaabadaas ay dowladdu ku dhaqaaqdo waxayna sheegtay in ay tahay arrin khilaafsan xeerka adduunka.
Amnesty ayaa sheegtay in tallaabada noocaas ah ay masiibo bani'aadannimo u horseedi karto caalamkan la daalaa dhacay xanuunka Covid-19.
Mas'uulka Amnesty International u qaabilsan Soomaaliya, Cabdullaahi Xasan, oo loo yaqaanno Cabdullaahi Soomaali, ayaa BBC-da u faahfaahiyay qodobbada ugu muhiimsan warbixinta ay soo saartay hay'addooda.
"Hayadda Amnesty waxay aad uga soo hor jeeddaa baaqii kasoo baxay Kenya ee ahaa in ay muddo 14 maalmood gudahood ah ku xireyso xeyaha Kakuma iyo Dhadhaab," ayuu yidhi Cabdullaahi Soomaali.
"Arrinta ay ku marmarsiyootay Kenya ee ah in ay qaxootiga ku nool Dhadhaab iyo Kakuma khalkhal galinayaan amniga dalka ma jirto wax caddeyn ah oo ay u heysto Amnesty. Haddii ay jirto caddeyntaasna dowladda Kenya iyada ayaa looga baahan yahay in ay soo bandhigto."
Qodobbada ay hay'addu cuskatayna waxaa ka mid ah in Kenya ay jabineyso sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay Cabdullaahi Soomaali.
"Kenya waxay jabineysaa shuruucda caalamiga ah iyo sharciga u yaalla dalkeeda haddii ay dadka qaxootiga ah si khasab ah dib ugu celiso waddamada ay ka imaadeen," ayuu yidhi.
"Xukun kasoo baxay maxkamadda sare ee Kenya sanadkii 2007 ayaa ka mamnuucaya dowladda Kenya in ay tallaabadaas sameyso. Maxkamadda xukunka kasoo baxay wuxuu dhigayay in ay sharci darro tahay, dastuurka dalka Kenyana ay khilaafsan tahay in dowladda Kenya ay si lama filaan ah u xirto xero dhan oo qaxooti ay ku nool yihiin iyadoo xaaladihii ay dadkaas kasoo carareen ay wali ka jiraan waddamadii ay kasoo tageen."
Amnesty ayaa sheegtay in ay rajeyneyso in Kenya ay aqbasho baaqa ay ugu jeedisay dib uga noqoshada go'aanka xiritaanka xeryaha.
Sidoo kale waxay hay'addu codsatay in dadka qaxootiga ah ee u qalma sharciga muwaadinnnimada Kenya in la siiyo dadka kalena ay waddamada caalamka ee soo galootiga qaabila la wareegaan.
"Dalalka quwadaha leh waxaan ka codsaneynaa in ay Kenya ku caawiyaan sii martigalinta qaxootiga, haddii ay suuragal tahayna waddamada sida Mareykanka iyo Ingiriiska in ay dadka dib u dajin u sameeyaan haddii ay awood u heli weyso Kenya," ayuu yidhi Cabdullaahi.